Samsung nwere ike ibido Galaxy Fold Lite | Gam akporosis
Samsung nwere ike ịmalite Galaxy Fold Lite
Afọ 2019 bụ afọ nke ngosi nke mbụ ọgbọ Galaxy Fold, ọgbọ mbụ biri ndụ kwekọrọ n'ihe ọ gụnyere ma nwee ọtụtụ ihe imeziwanye. Site na ọgbọ nke abụọ nke Samsung malitere n'August gara aga, ụlọ ọrụ Korea mere ka ọtụtụ n'ime ihe ndị na-adịghị mma dị mma. Ọzọkwa, na mmalite nke afọ, ọ wepụtara Glaxy Z Flip.
2021 yiri ka ọ bụ afọ nke mpịachi ekwentị maka Samsung, ebe ọ bụ na ọ na-ezube ịmalite otu abụọ, mana atọ dị iche iche ụdị na ahịaDị ka ụmụ okorobịa si UBI Research, otu n'ime ha ịbụ Lite version nke ga-enye ohere ịgbasa ọtụtụ ndị ọrụ nke Samsung mpịachi smartphones.
Ọnwa ole na ole gara aga, anyị kwuru maka ohere Samsung ga-ebupụta ụdị Lite nke Z Fold, mana anyị anụbeghị ihe ọ bụla karịa ọnwa. Litedị Lite a ga - enwe obere ihu karịa Fold Z ugbu a, ihe dịka 7,5 sentimita site na 8 dị ugbu a na ihuenyo mpụta ga-adị n’agbata sentimita anọ na ise site na 6,5 sentimita asatọ nke ụdị ugbu a.
Banyere ọnụahịa nke Galaxy Z Fold Lite, nke a nwere ike ịbụ na ọkara n'etiti ọnụahịa nke elu S21 dị elu na ọnụahịa nke Galaxy Z Flip, n'etiti euro 1000 na 1500. Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị kwuru banyere Mbelata ọnụahịa nke Samsung S, mbelata ọnụahịa nwere ike ịbụ ihe kpatara okike Fold Lite a.
Ma kwa, ihe ọzọ iji malite usoro akụ na ụba nke eriri ekwentị ya bụ n'ihi na ọ rụzuru weta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbatị, otu n'ime ihe ndị kasị mkpa akụkụ na a mpịachi ama (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ịgwa Motorola na RAZR) na àjà ihe ọ ultraụ -ụ na-mkpa iko mkpuchi na-ekpuchi ihuenyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Samsung nwere ike ịmalite Galaxy Fold Lite
Android 11 na-abịa Vivo V20 Pro 5G na mmelite ọhụrụ
Igwefoto azụ nke Mi 10 Ultra dị ezigbo mma, ma ọ bụghị nke ukwuu n'ihu ya [Nyochaa]